warkii.com » LAYAAB: Ma Xataa Sergio Aguero?! Foden Oo Qaab Aan Hore Loo Arag U Amaanay Mason Greenwood, Kana Sarraysiiyey Aguero & Jesus
LAYAAB: Ma Xataa Sergio Aguero?! Foden Oo Qaab Aan Hore Loo Arag U Amaanay Mason Greenwood, Kana Sarraysiiyey Aguero & Jesus
Xiddiga Manchester City ee Phil Foden ayaa si wareer ah u amaanay da’yarka Manchester United ee Mason Greenwood, waxaanu ku tilmaamay inuu yahay weeraryahankii ugu wanaagsanaa, uguna fiicnaa dhalinta goolasha ee abid uu arko.
Greenwood oo ay da’diisu tahay 18 sannadood, waxa uu xili ciyaareedkan wacdaro ka dhigayaa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, isaga oo 15 gool u dhaliyey kooxdiisa, kuwaas oo ay ugu dambeeyeen labadii uu u saxeexay kulankii Bournemouth ay 5-2 ku karbaasheen.
Mason Greenwood waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda soo baxaysa ee Ingiriiska u dhashay, Bukayo Saka, Mason Mount iyo Tammy Abraham, laakiin Phil Foden ayaa isaguna muujiyey inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahannada da’da yar ee Ingiriiska shidan doona sannadaha soo socda.
20 jirkan oo laba sannadood oo uu ka ciyaarayay Etihad Stadium wax badan ka bartay David Silva, Kevin de Bruyne iyo Sergio Aguero, waxa uu Pep Guardiola u carbinayaa inuu beddelo Silva oo xagaagan ka tegaya kooxda.
Foden oo ka garab ciyaaray Sergio Aguero oo lagu tilmaamo dhaliyeyaasha ugu wanaagsan dunida iyo Gabriel Jesus oo hadda raadkiisa haya, waxa uu rumaysan yahay in Mason Greenwood uu yahay ciyaartoygii ugu xigmadda badnaa dhamaystirka kubadda.
“Mason Greenwood ayaa ugu wanaagsan dhamaystirka kubadda, waanu isticmaalaa labadiisa lagudood marka uu soo galo xerada ganaaxa iyo marka uu marka uu ku dhow yahayba.” Ayuu yidhi Foden.
“Mar walba wuxuu doonayaa inuu dhaliyo. Wuxuu samaynayaa toogasho sax ah, wuxuu garanayaa marka ay tahay goorta ay tahay inuu laago iyo laga joojinayo. Goolhayeyaashuna mar walba ma ahaadaan kuwo deggan.”